Abavelisi beCrafter Core kunye nababoneleli - China Umzi mveliso weFerrite Core
Umsonto weferrite ophambili
Njengezinto ezisisiseko zeshishini le-elektroniki lale mihla, izixhobo zemagnethi zifunwa ngophuhliso olukhawulezileyo kunye nophuhliso olukhawulezileyo kumzi mveliso wekhompyutha. Iminyaka eli-15 yamava kwi-R & D ye-ferrite kunye nemveliso. Inkampani ibonelela abathengi ngoluhlu olupheleleyo lwezisombululo zemveliso. Ngokwenkqubo yezinto eziphathekayo, inokubonelela ngezinto ezithambileyo zeferrite ezinje ngothotho lwe-nickel-zinc, uthotho lwe-magnesium-zinc, uthotho lwe-nickel-magnesium-zinc, uthotho lwe-manganese-zinc, njl. ngokobume bemveliso, inokwahlulahlulwa ibe-ezimilise, ezimilise ngeentonga, ezimilise okwe-cylindrical, ezimilise ikepusi, kunye nohlobo lwentambo. Iimveliso zamanye amacandelo; Ngokokusetyenziswa kwemveliso, esetyenziselwa ukufakelwa kwemisesane yombala, i-inductors ethe nkqo, induction induction inductors, inductors yamandla eSMD, inductors yemodi eqhelekileyo, inductors ezinokuhlengahlengiswa, iifilitha zokucoca ulwelo, izixhobo ezifanayo, uxinzelelo lwengxolo ye-EMI, abaguquli be-elektroniki, njl.
Isiseko se-Sendust ferrite
Kufuphi ne-magnetostriction yenza i-Sendust cores ifaneleke ekupheliseni ingxolo evakalayo kwii-inductors zokucoca ulwelo, eyona lahleko iphambili ye-sendust cores ibaluleke kakhulu kunaleyo yeentsimbi zomgubo wentsimbi, ngakumbi i-sendust E iimilo zibonelela ngamandla aphezulu okugcina amandla kunokuba kuvaliwe. Ukugqitywa kwe-cores sentust kugqityiwe kwi-epoxy emnyama.
Intonga yeferrite yamandla aphakamileyo
Iintonga, imivalo kunye nee-slugs zihlala zisetyenziswa kwisicelo se-eriyali apho kufuneka ibhendi emxinwa. Izinti, imivalo kunye nee-slugs zinokuba yi-mde kwi-ferrite, umgubo wentsimbi okanye i-phenolic (umoya wasimahla). Iintonga ze-Ferrite kunye nemivalo lolona hlobo luthandwayo. Iintonga zeFerrite ziyafumaneka kububanzi obumiselweyo kunye nobude.
Ii-Ferrites zinobunkunkqele, zizakhiwo ze-ceramic ezifanayo ngokuxuba i-iron oxide kunye ne-oxides okanye i-carbonates yesinyithi esinye okanye ezingaphezulu ezifana ne-zinc, manganese, nickel okanye ne-magnesium. Bacinezelwe, emva koko badutyulwe eziko nge-1,000 ukuya kwi-1,500 ° C kwaye benza umatshini njengoko kufuneka ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zomsebenzi. Amalungu e-Ferrite anokubunjwa ngokulula nangokwezoqoqosho kwiijometri ezininzi ezahlukeneyo. Iseti eyahlukeneyo yezixhobo, ebonelela ngoluhlu lwezinto ezinqwenelekayo zombane kunye nezoomatshini, ziyafumaneka kwiMagnetics.